Wasiiradda Socdaalka Denmark oo facebook-ga soo dhigtay sawir Nabi Muxamed lugu aflagadeeynayo | Somaliska
Wasiiradda Socdaalka Denmark oo facebook-ga soo dhigtay sawir Nabi Muxamed lugu aflagadeeynayo
Haweeneyda uga ah dalka Deenmark wasiirka socdaalka Inger støjberg, ayaa fadeexaddii ugu weyneyd dhex dabaalatay ka dib markii ay bar ku sheegeda facebook soo dhigtay sawir gacmeed kartoon ah oo ka mid ah kuwo horey loogu gafay Nabi Muxamed NNKH.
Haweeneydan oo ka muuqda sida ugu qanacsan tahay soo saarita sawirkaasi ayey qoraal dheer oo ay ku dabaqday ama raacisa sawirkaasi foosha ku sheegtay in uu qiimo agteeda ka leeyahay Deenmark-na ay jeceshay. Muuqaal kartooneed-kan ayaa waxaa sawiray nin lugu magacaabo Kurt Westergaard, kaas oo uu naceybka iyo muslimiinta u qabo ku shaaciyey wargeyslkii la oran jiray Jyllands Post oo ka soo baxa dalkaasi. Ninkan ayaa waxaa loogu hanjabay dil, wuxuuna sidoo kale ka bad baaday isku day dil.
Haweeneydan oo sida ay ku macneeysay qoraaladeeda ku jira facebook-ga ku sheegtay in uu yahay mid taageero u ah xurutal qowlka, iyadooo horey madxaf taariikhda lugu keeydiyo dalkaas ku yaala uu diiday in sawiradaasi lugu soo bandhigo. Madaxda ugu sareysa ee dalkaasi ayaa ka gaabsaday ineey ka hadlaan gaar ahaan ra’iisal wasaaraha oo saxaafaddu wax ka weydiisay falka wasiiraduu ku kacday. Arrinta cajiib ah ayaa sida haweeneydan oo wasiirad sheeganeeysa ay ugu dhaq dhaaqday talaabo lugu ihaaneeynayo malyuumaad muslmiin ah oo caalamka ku dhaqan.
Dhinaca kale haweeneydani oo tan iyo markii sawirkan foosha xun soo dhigtay barteeda facebook isha ku heeysa tacliiqa dadka ayaa falkeedan gurucan ku macneeysay ineey dhowreyso waxa ay ku sheegtay xuruytul qowlka farqina u dhaxeeyo cunsurinimaddda iyo xorriyadda hadalka, hadalkan ayey sheegtay markii shaqsi uu ku . sheegay ineey tahay cunsuriyad.
Sawiradan foosha xun ee farshaxanka ah ayaa markii ugu horeeysay waxaa lugu daabacay wargeyska Jyllands Posten 30-kii bishii sibteembar sanadkii 2005-ta, wixii ka dambeeyeyna waxaa uu abuuray ciid weyn oo dhaxeeysa dalalka Islaamka oo badankooda ay ka dhaceen dibad baxyo looga soo horjeedo sawiradaasi oo ka koobnaa 12 xabbo, dalalka Islaamka ayaa xilligaasi waxaa ay dhaleeceeyeen falkaasi. Sacuudi Careebiya waxaa uu xirriirkii ganacsi iyo diblomaasiyaad u jaray inkastoo muddo ka dib dib loo soo celiyey. Deenmark xilligaas ma aanu bixin cudur daar rasmi ah. Balse waxaa soo wajahay dhirbaaxo xoog leh oo xagga dhaqaalaha ah. Hase ahaatee talaabadda ay wasiirad ku sheegu sameeysay ayaa u muuqan kara mid markale xiisad abuuro xilli ay kooxaha cunsuriyiinta ah ay ku soo badanayaan awoodooda dalalka Yurub.
Ugu dambeyntiina shabakadda Somaliska.com, wuxuu ka xishooday inuu soo daabaco muuqaalkiisi ihaanadda ku ah suubanaheenna Muaxamed NNKH. kana door bidnay in uu daabaco muuqaalka haweeneydan wasiiradda lugu sheegay ee aan tixgelin u aheyn diimaha kala duwan ee caalamka iyo xorriyadda ra’yiga.
Dugsiga islaamiga ah ee Al-Azhar oo lugu eedeyey inuu kala sooco gabdhaha iyo wiilasha
Masaajid lagu weeraray qamri iyo kondom